“Ilbaxnimo kastaa waxay ku qotontaa taariikh bulsho oo wax laga bartay. Shuruucda iyo xeerarka dadku samaystaana waxay ka amba qaadaan waayo-aragnimada iyo baahida bulshadaas. Sidaas awgeed, Afrikaan.so waa deggel hormuud u ah wararka madaxa bannaan iyo ajendaha-dejinta wararka, falanqaynta siyaasadeed iyo faallooyinka fikirka-gaarka ah ee sida gaar ah loogu qoray/diyaariyey jiilka cusub ee fikirka madax-bannaan iyo kuwa muxaafadka ah.
Sidoo kale, Afrikaan.so waa deggel u taagan in qoraalku noqdo mid qiimo leh, in aragtiyada iyo xal u helida dhibaatada bulshadeena lagu lafa-guro. Sida ka muuqato sumada websaydkeena waxaad ka helaysaa dhammaan cilmiga noocyadiisa kala duwan ee lagu baahiyey. Waxaa guud ahaan aqoonyahanada iyo qorayaasha ku boggaadineynaa siddii ay dalkooda dhaxal ugu reebi lahaayeen ugana soo saari laheeyeen dal dhaafsan dalalka caalamka, iyadoo loo maraayo aragtida ah ‘Xalka waa xaggee?’”
Afrikaan.so – “waa codka xorriyadda iyo la daggaalanka bey’ad uu qof kaligii ka taliyo ama la xariira dadka aaminsan si fikradahooda jira loo xoojiyo fikradaha kale ee aan loo qaddarin.”
“Ma aaminsani in horumarka la joojin karo. Laakiin waxaan rabnaa inaan saameyn ku yeelanno oo aan saxno. Waxaan aaminsanahay in isbaddalka uu dhacayo iyadoo la illaalinayo oo lagu dhisaayo qiimaheena dhaxalka ah, caaddooyinka iyo xigmadaha kuwaasoo ina siiyay habka aan u nool nahay iyo aasaaska nolosheena. Taasi waa sababta aan u jirno, waana sababtaas akhristeyaasheena ay usii kordhayaan.” – Afrikaan.so
Asalka iyo taariikhda Afrikaan.so
Afrikaan waxaa la aas aasay 15 juun 2015, waxaa tifatire iyo agaasimaha ugu horeeyay ka noqday Cabdijabaar Sh. Axmed. Afrikaan.so waa websaydkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo laga hirgeliyo adeegsiga qaab qorista (weblog) qaab ahaan. Wakhtigaas la aasaasay illaa iyo maanta waxaa sii kordhaayo tirada dad ee naga sii mid noqonaayo. Guud ahaan, waxaa Afrikaan wax ku qoray 70 qof, waxayna ku hawlanyihiin arrimo kala duwan – laga soo bilaabo qorayaasha maqaalada, suxufiyiinta illaa farsamooyinka teknolojiyada iyo suuq-geynta. Intooda badani waxay ku shaqeeyaan tabaruc iyo lacag la’aan.
Qaababka qorayaasha ay ugu mid noqon karaan Afrikaan.so
Waxaad kusoo diri kartaa lambarkaan hoose,
+252 612 873331
EVC Plus, ZAAD, Sahal iyo E-dahab
In la soo saaro bulsho waxtar leh islamarkaana hal abuur fiican leh, iyadoo lagu horumarinaayo qalinka ma ahan wax fudud. Haddii aad tahay qoraa mise aad tahay qof jecel aqrista iyo qoraalka waxaa nahay dadkii aad la midoobi lahayd. Si aad ugu mid noqoto bahdaan waxaad u baahan tahay inaad raacdo qodobadaan hoose, – 5 qoraalo*maqaalo oo diyaarsan waliba aad si qurux badan u qortay. Waxaadna kusoo diraysaa emailka: qoraa@afrikaan.so
Sidoo kale waxaad soo raacisaa sawirkaaga iyo taariikh-daada oo gaaban (sida qibradaada shaqo, aqoontaada iwm bogg haafkiisa oo kali). Intaas kadib qiimeyn ayaa lagu sameyn doonaa qoraalkaaga sidoo kale waxaa lagu baahin doonaa websaydka Afrikaan.so waa haddii ay noqdaan kuwa waxtar leh.
Haddii aadan qoraa ahayn balse aad tahay qof rabo inuu wax qoro waxaad u baahan tahay inaad qaadato tabbabar qoraanimo oo ay bixiso Afrikaan.so qiimaha waa $5 oo kali. Tabbabarkaan oo dhammeystiran waxaa laguugu soo dirayaa emailkaaga. Tabbabarkaas kadib waxaa laguu diri doonaa 5 qoraalo oo kala cinwaano ah inaad soo qorto kadibna waxaa la qiimeyn doonaa qaab qoraalkaaga. Dhammaan cinwaanada qoraaladaada adiga ayaa dooranaayo. Waxaad nagala soo xariiri kartaa emailka: qoraa@afrikaan.so
Yaa kale oo kamid noqon kara Afrikaan.so?
Marka horeba qaabka loo dhisay Afrikaan.so waa qaab ay kamid noqon karaan cidwalbo oo danaynayso bulshada, cilmi baarista, falanqaynta, caafimaadka, sayniska iyo dabagalka siyaasadda iwm. Waajib ma ahan inaad qoraa ahaato ama aad horey buuggaag usoo qortay.
Haddii aad xiisaynayso qodobadaan hoose, waad kamid noqon kartaa Afrikaan.so:, Cilmi barista, Falanqeynta arrimaha siyaasadda, diplomasiyadda, waxbarashada, caafimaadka, arrimaha qoyska, sayniska, iyo dib u eegista qalallaadka afka Soomaaliga iwm. Qoraaladaada waxaad ku soo diri kartaa emailka: qoraa@afrikaan.so
Qoraalada Afrikaan.so waxaa xaquuqdooda iska leh waa anaga, waxaa iska leh qorayaasha wax ku qora deggelkaan. Haddii aad doonayso/rabto qoraal ka mid ah qoraalada ay qortay Afrikaan.so waxaa wanaagsan inaad ku sheegto magaceena adigoo qaabka xusida u qoraayo sidaan, (Magaca qofka qoray *qoraaga qoray, cinwaanka qoraalkaas, sanadka la qoray qoraalka iyo magaca websaydka – ’afrikaan.so, kadibna raaci link-ga)
Tusaalle: (Cabdijabaar Sh. Axmed, NGO-yada Ma Burbur Ayay Abuuraan, Mise Dhaqaale?, 2020, janaayo 2020, Afrikaan.so, https://afrikaan.so/archives/13308)
Haddii aad u baahan in wax laguu xayaysiiyo. Waxaan bixinaa xal kugu habboon iyo fursado qaali ah si kor loogu qaado badeecadahaaga iyo farriintaada ee soo jiidashada macaamiishaada. Si hawshaan aan kuugu qabano nalla soo xariir.
Nagalla soo xariir:
– Kamid noqoshada, tabbabarada iyo qoraalada nagala soo xariir emailka: qoraa@afrikaan.so
– Haddii aad u baahan tahay macluumaad kale iyo weydiimo nagala soo xariir emailka: Afrikaan@afrikaan.so
May 24, 2019 at 8:57 pm	— Reply
walaal miyaan isticmali kara maqaladiina by youtube in aan soo galiyo waxan ilalinaya xuqudiina mahadsanidiin.
May 24, 2019 at 9:35 pm	— Reply
Haa waa laguu ogalyahay, waxaana shardi ah inaad ku xusto magaca qoraagga iskaleh maqaalka iyo magaca ururka uu ka tirsan yahay ee Tuke Somalism.
Mohamed abshir juujuule
February 23, 2020 at 4:37 pm	— Reply
Waxan doonaya inan ka mid noqdo bahda qoraalka
March 26, 2020 at 9:21 pm	— Reply
wllo waxaan ubaahanhy inaan kamid noqdo bahda qoraalka waxaan rabaa inaa maqaalo kooban soo qoro sidaa darteed gmailkiinu iima shaqeynaayo ee maxaan raaciyaa qoraa@afrikaan.so intaas
Fadlan emailkaas wuu shaqeynayaa ee nagala soo xariir. Sidoo kale waxaan kuu soo dirnay email anagoo isticmaalayno emailkaaga. Haddii uu kuu shaqeyn waayo midkaas xittaa waxaad nagala soo xariiri kartaa emailkeenna kale Afrikaan@afrikaan.so
March 28, 2020 at 12:21 pm	— Reply
Waan idin salaamey.
Free trians mabixisaan
Waxan rabaa in aan noqdo qoraa lakiin wax dhaqaale ah maheli Kato.
March 28, 2020 at 12:53 pm	— Reply
Waan kaa qaadnay, macno malahan waan kaa bixin karnaa ee soo diyaar garoow, waxaadna nagala soo xariiri kartaa emailka naga ee afrikaan@afrikaan.so ama qoraa@afrikaan.so